लोकसेवाको वार्षिक क्यालेन्डरः कुन पदको परीक्षा कहिले? (तालिकासहित) - Everest Dainik - News from Nepal
लोकसेवाको वार्षिक क्यालेन्डरः कुन पदको परीक्षा कहिले? (तालिकासहित)
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा हुने पदपूर्तिसम्बन्धी परीक्षाहरूको वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन गरेको छ ।
तालिकामा आयोगले लिने निजामती सेवातर्फ राजपत्रांकित तथा राजपत्र–अनंकित विभिन्न श्रेणी, सुरक्षानिकाय तथा अन्य सरकारी सेवा संगठित संस्थाका परीक्षाहरूको मितिसहितको विवरण खुलाइएको छ । कार्यतालिका हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
याे पनि पढ्नुस तीन सय उपसचिव र १०० सहसचिवको भर्ना खुल्दै
ट्याग्स: लोकसेवा आयोग, वार्षिक कार्यतालि